Latest news about Featured from Nigeria & world | TODAY.NG
Gọọmenti Federal kwadoro imebi iwu n'ihi ụgwọ nke ndị ọrụ mgbasa ozi
Senator Nwaboshi nke EFCC jidere na-ekwu na ọ bụ nyocha N1.5
FA rịọ mgbaghara banyere tweet banyere Harry Kane
Gernot Rohr: Francis Uzoho ka o buru ibu ibu Super Eagles ...
Home Tags Apụta
Njegharia nke Naijiria kwadoro njide ejidere Senator Melaye
Ọrụ Njegharị na Nigeria (NIS) kwadoro njide nke Sen. Dino Melaye na Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja, n'ụtụtụ Monday.
Mba a na-enyefe onwe ya maka General Elections na February n'afọ ọzọ, ya na President Muhammadu Buhari na-agwa ya na ọ ga-agwa ndị na-achị isi, tiketi APC iji gbaa ọsọ maka okwu nke abụọ, ọkụ niile agbaghalarị hel, ogige ndị agha a kwadebere.
Senator Wamakko ekwetaghị ịnata oku EFCC
Senho Aliyu Wamakko, onye bụbu gọvanọ steeti Sokoto, gọrọ agọ ọ bụla ọ kpọrọ ka ọ bịa n'ihu Kọmitii Mpụ na Ụba (EFCC) maka omume rụrụ arụ.
Abụọ ndị na-egbu onwe ha igbu onwe ha gburu mmadụ atọ na Borno
Umu mmadu abuo ndi mmadu gburu onwe ha gburu ndi mmadu ato ndi na-efe Muslim n'ulo ulo alakụba n'ugwu Naijiria ka a na-ewu ya mgbe mbibi nke Boko Haram na 2014 mebiri.
Barcelona hammer Sevilla iji merie Copa del Rey
Lionel Messi na Luis Suarez kpaliri Barcelona na ihe ga-abụ akụkụ mbụ nke anụ ụlọ na okpukpu abụọ nke oge a ka ha na-emebi Sevilla 5-0 na Saturday iji merie Copa del Rey.
Egwuregwu Europa Njikọ zuru ohi na Mexico
E zuru ohi Europa League mgbe e gosipụtara ya na mkpọsa mgbasa ozi na Mexico, nanị ka a ga-eweghachi ya na awa ole na ole ka e mesịrị, ndị isi gọọmenti Guanajuato kwuru na Saturday.
Arsene Wenger bụ ịhapụ Arsenal na njedebe nke oge ahụ, na-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-adị nso na 22 afọ.
Shehu Sani: Mwakpo ndi otu obodo na-agbali igbako
Senator nke na-anọchite anya Kaduna Central, Shehu Sani, ekwuola na mwakpo nke ụlọ ndị omeiwu ahụ bụ ndị a na-enyo enyo na hoodlums dị ka nnwale nke ọgbaghara.
Ndị uweojii gbaghaara ndị inyom Senate na Abuja
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Nigeria kwuru na ọ gbakere Mace nke ndị mmadụ a na-amaghị ama si n'ọnụ ụlọ ndị Senate zụrụ.
Neymar enwekwu nchekwube banyere nlọghachi ụwa
Neymar nke mba Brazil na-atụ anya na ọ ga-adaba na World Cup nke oge okpomọkụ a ma kwuo na ọ ga-alaghachi ọzụzụ site na ụkwụ agbajiri na 17 May.
Tinubu na-aga n'ihu: Ihe mere Naijiria ji dị mwute
Asiwaju Bola Tinubu, Onye Ndú nke mba nile na-enwe ọganihu (APC), kwughachila ikpe ndị ọchịchị oge gara aga, karịsịa ọchịchị Jonathan maka nsogbu akụ na ụba nke mba ahụ.
APC kwupụtara ụbọchị maka mgbakọ mba
Nkwekọrịta National Congress nke All Progressive Congress (APC) ga-ejide na Monday, May 15, 2018, na-agbanye mgbanwe ọ bụla nke ikpeazụ.
123...72Page 1 nke 72
Ka nzuko ntuli aka nke 2019 bịaruru nso, onye isi oche nke National Progressives Congress, Chief John Odigie-Oyegun, na Monday na Abuja, dọrọ aka ná ntị na ndị òtù ya agaghị enwe mmetụta nke otu nnọkọ ikpe.
Onye bụbu onye France bụ Raymond Domenech, onye mmeri nke ụwa, bụ Lothar Mattaus na onye isi Wales bụ John Toshack nọ n'etiti ndị na-achọ 77 maka nchịkwa na-adịghị ahụ maka njedebe nke Cameroon.
Ndị Nọọmenti Na-ahụ Maka Nchịkọta Naijiria na Monday gwara Gọọmentị Gọọmenti ka ha kwupụta na ọ bụ ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ mgbasa ozi na-emejọ.
2019: I mebiela ndị Naijiria, n'ihi na ha achọghị ịchọta ntuli aka ọzọ "- Olu Falae gwara President Buhari
Onye isi oche nke National Social Democratic Party nke Nigeria (SDP), Olu Falae, emeela ka ọchịchị nchịkwa Buhari ghara ịba mba Naijiria na nchekwa na akụ na ụba.